Kokyaw Swarwin Abdullah Kurdi ဆိုတဲ့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံသား Kurd လူမျိုးနဲ့သူ့ဇနီးတို့မှာ
သားကြီးGhalib Kuidi နဲ့သားငယ် Aylan Kurdi ဆိုတဲ့ သားနှစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့ပြီး ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဒမတ်စကတ်မြို့မှာ နေထိုင်ကြ သူများဖြစ်ပါတယ်။
လာဘ်ငွေပေးပြီး အဖမ်းအဆီးခံးရာမှ လွံတ်မြောက်လာပြီးနောက် Abdullah Kurdi ဟာ
မိသားစုနဲ့အတူ ဆီးရီးယားနိုင်ငံအပိုလိုမြို့ကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အပိုလိုမြို့ရဲ့အခြေနေဟာ လေကြောင်းဗုံးကြဲမှုကြောင့် တစ်နေ့တစ်ခြားဆိုးဝါးလာတဲ့အတွက် သူ့မိသာစုဟာ ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့ကိုဗာနီမြို့ကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။
ဇွန်လအတွင်းက ကနေဒါနိုင်ငံမှာ ခိုလှုံခွင့်ရှိရေးအတွက် Abdullah Kurdi က လျောက်ထားပေမယ့် ကနေဒါနိုင်ငံဘက်က ငြင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ခင်ဗျာ့တို့ခံစားကြည့်ကြပါ။ ချစ်တဲ့ဇနီးနဲ့ကိုယ်အရမ်းချစ်တဲ့ သားနှစ်ယောက် ကိုယ်မျက်စိရှေ့မှာ ဆုံးရှုံးသွားတာကို လူသားချင်းကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါဗျာ။
သူတို့လို မိသားစုအဖြစ်မျိုးတွေ နောက်ထပ်မတွေ့လိုပါဘူးဗျာ Aylan Kurdi ကလေးငယ်မျိုး အလောင်းတွေ သဲသောင်ပြင်ပေါ် လာတင်တာမျိုးတွေ ကျနော်တို့ မမြင်လိုတော့ပါဘူးဆိုရင်……
လူသားအချင်းချင်းနှိပ်စက်ခြင်းကို တကမ္ဘာလုံး ဝိုင်းဝန်းကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ ။ ။ . ဒီကမ္ဘာကြီးသာယာပါစေ Nyi Say Min - ရေးသည်။. https://www.facebook.com/nyisay.min.90